IQOO Neo3 bụ Snapdragon 865 ọhụrụ nwere ihuenyo 144 Hz | Gam akporosis
Mgbe ọ kwuchara nke ukwuu banyere ọkwa ọkwa na ọtụtụ ọnya ndị ọzọ sitere na iQOO Neo3 N’izu ndị na-adịbeghị anya, e gosipụtagoro ya ma bido ya dị ka ọnụ arụmọrụ dị elu maka egwuregwu dịka anyị na-eme ka amata.
Ngwaọrụ a na - akụ ahịa ahụ dịka ama ama nke atọ iji gosipụta ngosipụta nkwụnye ego 144Hz; nke mbụ na nke abụọ bụ Nubia Red Ime Anwansi 5G y Nubia Gwuo 5G, n'otu n'otu.
1 Njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke ọhụrụ iQOO Neo3
1.1 Igwefoto 48 MP maka ezigbo foto foto
1.2 Mpempe akwụkwọ nka na ụzụ
Njirimara na nkọwapụta teknụzụ nke ọhụrụ iQOO Neo3
Ihe mbụ anyị mere ka anyị mata banyere ekwentị ọhụrụ a bụ imewe ya, ebe ọ bụ na ọ dịka igwe ndị ọzọ egwu egwu. Egwuregwu smartphones na - enweghị ihu igwe dị warara dị ka ngwaọrụ a. Na ileba anya mbu, ọ ga - adị ka ọkwa dị elu ọzọ. Mana nke a bụ ihe dị mma site n’echiche anyị, n’ezie; Anyị na-emesi ya ike dịka ihe ọjọọ.
Akụkụ azụ nke ekwentị a nwere grajentị na usoro foto foto nke nwere akụkụ anọ ma nwee kamera atọ na ọkụ ọkụ LED abụọ. N'akụkụ anyị na-ahụ bọtịnụ olu, onye na-agụ akara mkpịsị aka na bọtịnụ ngbanwu / ngbanwu / mkpọchi.
Na ọkwa teknụzụ, ihuenyo 6.57 nke anụ ọhịa IPS LCD bụ isi ihe ị ga-ahụ. Ọ na-ewepụta mkpebi FullHD +, 98% sRGB gamut gamut, DCI-P3 ma nwee teknụzụ HDR10. Ọ na-egosipụtakwa akụkụ atụmatụ 20: 9 yana ngebichi na-ahụ nke karịrị 90% ma na-ewepụta ume izu ike kachasị nke 144 Hz, na-eme ka ọ dị mma maka igwu egwuregwu na ogo dị elu kwa nkeji. Isi okwu ikpe a na-ekwenyekwa na mmiri dị mma na ịdị mma nke ọdịnaya, nke dị elu karịa 60 Hz nke anyị na-ahụ n'ọtụtụ ọgụgụ nke ekwentị ugbu a.
The iQOO Neo3 biara na nkwa Qualcomm Snapdragon 865, octa-core chipset nke nwere nchịkọta ndị na-esonụ: 1x Cortex-A77 na 2.84 GHz + 3x Cortex-A77 na 2.42 GHz + 4x Cortex-A55 na 1.8 GHz. Ya mere, Adreno 650 GPU bụ nke a ga-achọta n'okpuru mkpuchi nke ekwentị a dị ike. Ma ọ bụrụ na anyị agbakwunye na nke a UFS 3.1 usoro nchekwa, anyị nwere ngwakọta nke arụmọrụ dị elu. Na ya onwe ya, nhọrọ ROM bụ 128/256 GB, ndị nke RAM bụ 6/8/12 GB, ọ bụ ezie na ụdị kaadị RAM ọ na-etu ọnụ abụghị LPDDR5, kama LPDDR4.
Banyere batrị, anyị nwere batrị nke nwere ikike nke 4,500 mAh. Nke kachasị mma, ọ na-abịa na 44W nke na-ebu teknụzụ na-ebu ọnụ, nke na-ekwe nkwa ịkwụ ụgwọ site na efu ruo na ihe ruru. otu awa, nke dị obere oge maka nha dị otú a. Nke a bụ site na ọdụ USB ụdị C nke dị na nsọtụ ala ya.
Anyị natakwara gam akporo 10 ahaziri na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ, nke bụ iQOO UI. N'ezie, anyị enweghị ike ileghara njikọ 5G na ụdị a, nke enyere site na modem X55 nke agbakwunyere na SD865 chipset. Nhọrọ ndị dị ka Wi-Fi, Bluetooth na GPS anọghị na ụkọ bụ egwuregwu egwuregwu ọhụụ a.
Akụkụ ọzọ dị egwu nke iQOO Neo3 na-etu ọnụ bụ ya sọrọ stereo ọkà okwu, nke na-ekwe nkwa mmikpu, ahụmịhe dị mma dị mma maka mmezi nke ọdịnaya nke ọtụtụ ọdịnaya na egwuregwu. Nke a bụ ihe ekwuputara ụbọchị ole na ole tupu mmalite nke njedebe a. Ọzọkwa, banyere ọrụ egwuregwu na atụmatụ, usoro mmiri mmiri na-ekpo ọkụ maka ikpo ọkụ na ọrụ Multi-Turbo 3.0 Ha bụ ndị na-ebute ụzọ na-enye ahụmịhe egwuregwu na-enweghị atụ, n'etiti ndị ọzọ.
Igwefoto 48 MP maka ezigbo foto foto
Isi ihe na-akpali akpali nke dị n'ime igwefoto igwefoto okpukpu atọ na-etu ọnụ maka a 48 megapixel mkpebi na oghere gbadoro anya f / 1.79 nke na-ekwe nkwa nnabata ọkụ dị mma maka foto na nghọta doro anya na nkọwa dị mma.
Anya m abụọ ndị ọzọ gbakọtara igwefoto a bụ a 8 MP obosara akụkụ na oghere f / 2.0 na nnukwu ihe ọzọ na f / 2.4 maka foto dị nso na oghere. Maka selfies na ndị ọzọ enwere ihe mmetụta 16 MP na-etinye n'ime oghere ihuenyo nke etinyebere na akuku aka nri ya.
IKIRU IPS LCD 6.57 »FullHD + / 20: 9/144 Hz
Ndị isi Azụ: 48 MP Main (f / 1.79) + 8 MP Wide Angle (f / 2.0) + 2 MP Macro (f / 2.4) / Ihu: 16 MP
UMUAKA 4.500 mAh na 44 W na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa
OS Android 10 n'okpuru iQOO UI
Njikọ Wi-Fi / Bluetooth / GPS / Nkwado Dual-SIM / 4G LTE / 5G
Atụmatụ ndị ọzọ Mkpisiaka agụ na akụkụ / Face ude / USB-C / Dual stereo ọkà okwu
Mbibi na ibu ibu 163.72 x 75.55 x 8.93 mm na 199 g
IQOO Neo3 dị maka preorder, mana ọ gaghị ere ahịa mgbe niile ruo ugbu a. Eprel 29 na-esote. A na-enye ya ugbu a na ndò abụọ na-acha anụnụ anụnụ na anọ RAM na njikọta nchekwa, ndị dị ka ndị a:
6 + 128 GB: 2,698 yuan (~ euro 353 ma ọ bụ 382 na ọnụego mgbanwe)
8 + 128 GB: 2,998 yuan (~ euro 392 ma ọ bụ 424 na ọnụego mgbanwe)
8 + 256 GB: 3,398 yuan (~ euro 444 ma ọ bụ 481 na ọnụego mgbanwe)
12 + 128 GB: 3,298 yuan (~ euro 431 ma ọ bụ 467 na ọnụego mgbanwe)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » IQOO Neo3 bụ Snapdragon 865 ọhụrụ nwere ihuenyo 144 Hz